Iko kushandiswa kwe amoxicillin muvana | Bezzia
Kushandiswa kwe amoxicillin muvana
Maria Jose Roldan | | Zvemwanakomana wako
Amoxicillin ndiwo mushonga unonyanya kushandiswa pakurapa hutachiona hwehutachiona kune vese vakuru nevana. Kana vari vadiki, Iyo mhando yemishonga inorwisa mabhakitiriya inoshandiswa zvakanyanya nhasi, iyo inogona kupihwa chete kumwana kana yakatemwa pasi pemutemo wekurapa.
Panyaya yekutungamira kwayo, rairo dziri mupakeji dzinofanira kuteedzerwa nguva dzese nekuti zvikasadaro zvinogona kuisa hutano hwemwana panjodzi huru. Munyaya inotevera tichakurukura mune zvakadzama muyero wakakodzera uye izvo zvinokanganisa mhedzisiro iyo yainogona kubereka muvana.
1 Chii chinonzi amoxicillin chinoshandiswa muvana?
2 Amoxicillin mhedzisiro
3 Amoxicillin chipimo chemushonga
Chii chinonzi amoxicillin chinoshandiswa muvana?
Iko kushandiswa kukuru kwe amoxicillin kurwisa hutachiona hutachiona hunogadzirwa muchikamu chekufema kana chekugaya. Pane kupokana, mhando iyi yemishonga inorwisa mabhakitiriya haishande pakurwisa hutachiona mhando. Izvo zvakakosha kuti usazvipire wega mishonga yemwana uye kushandisa mushonga uyu wega. Kana mwana akabatwa nehutachiona hutachiona, unofanirwa kuenda kuna chiremba uye nyanzvi ichave ari mutariri wekuongorora kana zvakakodzera kushandisa amoxicillin kurapa hutachiona hwataurwa.
Panyaya yevana, kana vakapiwa amoxicillin vanofanirwa kuramba vachinwa mvura zhinji mukuwedzera pakutora yakawanda pee kuitira kuti vakwanise kubvisa zvakasara zvemutachiona zvambotaurwa kubva mumuviri wavo.
Sezvazviri nezvizhinji zvekurwisa mabhakitiriya, Kutora amoxicillin kunogona kukonzera huwandu hwemhedzisiro mumwana. Dzakanyanya kuitika ndedzinotevera:
Dzungu uye kusvotwa
Mapundu uye kuputika kweganda
Kana iwe ukacherekedza kuti mwana wako anotambura neimwe yemimwe mhedzisiro, Iwe unofanirwa kuenda kuna chiremba kuti uchinje muyero waunofanira kutora.
Amoxicillin chipimo chemushonga
Panyaya yevana, mhando iyi yemishonga inorwisa mabhakitiriya inowanzo kupihwa muchimiro sirasi kuti ifambise kudyiwa kwayo uye vanogona kuitora pasina dambudziko. Sirasi inoshandiswa zvakanyanya uye inozivikanwa muSpain ndeye 250 ml Clamoxyl. Panguva yedhizaiti iwe unofanirwa kuteedzera rairo yakapihwa nachiremba wevana kana iyo yaunotarisa mune iro kapepa mukati memushonga. Kunyange zvakadaro, iyo chaiyo dosi ye amoxicillin inoverengeka nekuwedzera 50 mg yesirosi nekurema kweiyo diki. Mhedzisiro yekuvhiya kwakadaro inoratidza muyero wakakodzera uyo mwana waanofanira kutora. Iyo inokonzerwa nedosi inofanirwa kuve yakakamurwa kuita akawanda madosi pazuva kuti vakwanise kurwisa zvakakwana hutachiona hwakatambura nemwana.
Amoxicillin ndiyo inorwisa mabhakitiriya inoshandiswa zvakanyanya muvana kurwisa mamiriro akasiyana izvo zvinogona kukanganisa zvese mweya wekufema kana wekugaya. Iyo mishonga inorwisa mabhakitiriya inongogona kupihwa nemushonga kubva kuna chiremba. Muyero unoshandiswa nemwana unofanirwa kuve iwo unoratidzwa nehunyanzvi uye pasina mamiriro ezvinhu anogona kuchinjwa kana kushandurwa, nekuti zvinogona kukanganisa hutano hwemwana uye kukonzera matambudziko akasiyana siyana emhando dzakasiyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Zvemwanakomana wako » Kushandiswa kwe amoxicillin muvana
Chii chinonzi kuva neBP? Mishonga yekumba yekurwisa iyo
Tsvaga iyo Zara lingerie muunganidzwa